Ny lalamby Rosiana sy ny lalamby Belarosiana dia nitatitra ny fandefasana nomerika voalohany teo amin'i Azia sy Eropa
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Ny lalamby Rosiana sy ny lalamby Belarosiana dia nitatitra ny fandefasana nomerika voalohany teo amin'i Azia sy Eropa
Ny fitaterana ny kaonteneran'ny mpanelanelana mody dia natao tamin'ny 3 septambra avy tao amin'ny Port of Ningbo any China amin'ny alàlan'ny Port of Vladivostok any Russia mankany amin'ny gara Kolyadichi any Belarus ao anatin'ny tetikasa INTERTRAN.
Ity fitaterana ity no lasa fandefasana kaontenera fitaterana nomerika voalohany anelanelan'ny Azia sy Eoropa nalamin'ny lalamby rosiana, lalamby belarosiana ary vondrona fitaterana FESCO.
Ny teknolojia INTERTRAN dia efa namboarina nandritra ny Ry Railovy Rosiana tambajotra, ary kaontenera maherin'ny 6,000 no nafindra tamin'ity serivisy ity.
Ny serivisy dia nampihena ny fotoana ilaina amin'ny fikarakarana antontan-taratasy momba ny entana amin'ny efatra andro. Ny fampiasana ny antontan-taratasy fitaterana elektronika fotsiny, ny fanambaràna momba ny fitaterana ary ny fahazoan-dàlana elektronika no nahatonga izany.
Ny vokadratsin'ny tetik'asa INTERTRAN dia hita miharihary nandritra ny Covid-19 areti-mifindra, satria ny fanodinana dizitaly dia nampihena ny fifandraisana ara-batana nandritra ny fitaterana farafaharatsiny.
Ny tetik'asa INTERTRAN dia natolotra tao amin'ny 5th Eastern Economic Forum tamin'ny volana septambra 2019. Ny rafitra elektronika dia natao hampivelarana ny fitaterana anelanelan'ny vanimpotoana any Eurasia, hampihenana ny taratasy ary hanafainganana ny fifandraisan'ny antoko rehetra amin'ny fizotran'ny fitaterana. Ireo fandefasana ireo dia tanterahina matetika avy any Japon, Sina ary Korea atsimo.
Ny trano fandraisam-bahiny Tru by Hilton vaovao indrindra dia hisokatra ao Orlando
Emirates dia manohy ny sidina mpandeha mankany Lagos sy Abuja